Iflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla netofotofo ekwindawo es - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla netofotofo ekwindawo es
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLarissa
Le flethi inamagumbi ayi-2 anamagumbi aliqela apho abantu abayi-2 banokuhlala abantu abayi-2. Ukuze isetyenziswe nangabanye abantu, kukho igumbi lokuhlambela elineshawa nesinki, ithobhi nekhitshi elinesitovu, ioveni nefriji.
Amalungiselelo okulala anezinto zebhedi ezicocekileyo. Igumbi lokuhlambela lihlala lixhotyiswe ngezandla neetawuli zokuhlamba ezisandul 'ukuhlanjwa. Kukho nomatshini wokomisa iinwele ukuze womiswe emva kokuhlamba.
4.89 out of 5 stars from 88 reviews
4.89 · Izimvo eziyi-88
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi88
Le flethi isembindini weGeislingen. Ijikelezwe yindawo yeevenkile "iNell Mezzo", indawo yokubhaka neevenkile ezinkulu.
Kwimizuzu embalwa yokuhamba ungafikelela kwidolophu endala enembali kwaye ngexesha elinye ummandla wabantu abahamba ngeenyawo kwisixeko saseGeislingen an der Steige.
Xa usendleleni uza kudlula kwiCity Outlet Geislingen esandul 'ukwakhiwa. Apho uza kufumana umzi-mveliso odumileyo we-WMF, indawo ebizwa ngokuba yi-Fish Hall. Kukho neevenkile zeLind, iTriumph, iGardena, iTrigema nezinye ezininzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Larissa
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Geislingen an der Steige